Unicode Archives - Page2of 10 - Saturngod
Zawgyi Decode in Android Q ?
ဒီနေ့ Win Mobile က ကိုစိုးနောင်ဝင်း ပြောလို့ Android Q ကို Emulator စမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ Android Q မှာ ဇော်ဂျီတွေ မြင်နေရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Emulator နဲ့ စမ်းကြည့်တော့ 90% လောက် က ဖတ်လို့ရတယ်။ GBoard ကို အသုံးပြုပြီး ဇော်ဂျီ နဲ့ ရေးလို့လည်း ရတယ်။ Zawgyi Decode လိုမျိုး font အသစ်တစ်မျိုး ကို မြန်မာ အတွက် စ စမ်းထားတယ်လို့ ထင်တယ်။ Android Q မှာတော့ language မှာ မြန်မာလို့ ထားလို့ရပြီ။ လက်ရှိ က Samsung သုံးနေတာ ဆိုတော့… Continue reading Zawgyi Decode in Android Q ?
Categorized as News Tagged Android, myanmar, Unicode, Zawgyi
Rabbit Converter Mac App
Rabbit Converter ကို လူတော်တော်များများ သိပါလိမ့်မယ်။ WTFPL လိုင်စင် နဲ့ပေးထားပြီးတော့ ဘယ်သူမဆို လွယ်လင့်တကူ ကူးယူ အသုံးပြုနိုင်သည့် Zawgyi ကနေ Unicode, Unicode ကနေ Zawgyi ပြောင်းသည့် editor လေးပါ။ အခု mac အတွက် App ကို App Store ပေါ်ကနေ download ချနိုင်ပါပြီ။ အခု Version က အကြမ်းထည်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ design တွေ နောက်ပြီးတော့ menu bar icon တွေ ထပ်ဖြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Categorized as Download Tagged Unicode, Zawgyi
Blog ကို ဇော်ဂျီ ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ unicode နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စသိခဲ့တာကတော့ Myanmar2font က စခဲ့တယ်။ စာလုံးတွေ အစုံ မပါသေးသလို မြန်မာစာကလည်း သေသေချာချာ အလုံးစုံ ရိုက်လို့ မရသေးဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာ ၂.၂ ပြောင်းတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာ ၃ ပြောင်းတယ်။ မြန်မာ ၂ က ရိုက်ထားသည့် စာတွေ အကုန်လုံး မြန်မာ ၃ မှာ မမြင်ရတော့ဘူး။ converter တွေကလည်း မြန်မာ ၂ ကနေ မြန်မာ ၃ ပြောင်းသည့် အချိန်မှာ ချက်ခြင်း မထွက်လာနိုင်ခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၇ လောက်တုန်းက လူတိုင်း အင်တာနက် မသုံးသေးသည့်… Continue reading Why Zawgyi
Categorized as စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုများ Tagged Unicode, Zawgyi
Rabbit Zawgyi Unicode Converter (iOS) 1.1
Rabbit converter ကို အသုံးပြုထားသည့် Rabbit Zawgyi Unicode Converter ကို ကျွန်တော် version 1.1 ကို ထပ်ပြီး update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Rabbit ကို တကယ်လက်တွေ့ အသုံးပြုသည့် အခါမှာ ပြဿနာ ၂ ခု ကို ကျွန်တော် ကြုံရတယ်။ ပထမ တစ်ခုက zawgyi ကော unicode ကော ပြချင်တယ်။ နောက်ပိုင်း အချို့က Zawgyi Version , Unicode Version ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရေးကြရတယ်။ နောက်တစ်ခုက တခြားသူတွေက Unicode နဲ့ ရေးထားတာကို ချက်ခြင်း ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်။ Zawgyi နဲ့ ရေးထားတာတွေကို… Continue reading Rabbit Zawgyi Unicode Converter (iOS) 1.1
Categorized as News Tagged myanmar, Unicode, Zawgyi
Google Search and Myanmar Unicode
ဒီနေ့ 7day website မှာ သတင်းဖတ်ရင်းနဲ့ သတင်း အဟောင်းတွေကို Google မှာ ရှာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ ရှာကြည့်လိုက်တော့ ဘာ ရလဒ်မှ မထွက်လာတော့ တော်တော် အံဩသွားတယ်။ ဒါနဲ့ unicode နဲ့ ရှာကြည့်လိုက်တော့ ရှာချင်တဲ့ ရလဒ်က ချက်ခြင်း ထွက်လာတယ်။ ပထမတော့ 7day ကများ ဇော်ဂျီကနေ unicode ကို site တစ်ခုလုံး ပြောင်းလိုက်တာလား ဆိုပြီး စစ်ကြည့်လိုက်တော့ 7day က ဇော်ဂျီပဲ သုံးထားတယ် တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ မသင်္ကာတာနဲ့ Eleven News ကို ရှာကြည့်တော့လည်း စာတွေ အကုန်လုံးကို ဇော်ဂျီကနေ unicode ပြောင်းသိမ်းထားပြီးတော့ Unicode နဲ့ ရှာမှသာ အလုပ်လုပ်တော့တာ… Continue reading Google Search and Myanmar Unicode
Categorized as News Tagged google, Unicode, Zawgyi
Ornagai and MMConverter Telegram Bot , MMConverter API
Telegram ဆိုတာကတော့ WhatsApp , LIne , Viber တို့လို့ Messenger ပါပဲ။ Telegram က bot တွေကို ရေးသားခွင့်ပေးထားပြီးတော့ bot ကို message ပို့လိုက်ရင် ပို့လိုက်တဲ့ data ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ bot က reply ပြန်ပေးပါတယ်။ OrnagaiBot Ornagai dictionary အတွက် ရဲလင်းအောင် က ရေးထားတာပါ။ Telegram app ရဲ့ contact ကနေ OrnagaiBot ကို ရှာပြီး ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ Dictionary အတွက် /e အနောက်မှာ စာရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အဓိပ္ပာယ် ပြန်ပေးပါတယ်။ /e word OrnagaiBot ရဲ့ source… Continue reading Ornagai and MMConverter Telegram Bot , MMConverter API
Myanmar Unicode Sorting in MySQL (MariaDB)
MySQL မှာ Sorting စီတာကို သံလွင် Soft က Keith (1976-2011) မဆုံး ခင် ကတည်းက ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ Keith ဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း သူ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူ့ code တွေ အကုန်လုံးကို github မှာ တင်ထားတဲ့ အတွက် mysql Myanmar Collation source code ကို ရယူနိုင်သလို ကိုငွေထွန်းက 2006 မှာ MySQL ရဲ့ bug report site မှာ Myanmar Collation Extension ထည့်ဖို့ ပြောထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် MySQL အနေနဲ့ offical support လုပ်ဖို့… Continue reading Myanmar Unicode Sorting in MySQL (MariaDB)
Categorized as Knowledgebase Tagged mariadb, myanmar, MySQl, Unicode